Car Maintenance - TA Resources Myanmar
Shell Rimula R2 Extra သည် တာဘိုတပ်(သို့) မတပ်သည့် ယာဉ်များစွာအတွက် ပုံမှန်မောင်းနှင်မှု အခြေအနေတွင် ရွေးချယ်သင့်သည့် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သက်တမ်းရင့် ကုန်တင်ကားများ၊ ဘက်စ်ကားများ နှင့် ကုန်ကျစားရိတ်သက်သာလိုသော လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များ-ဥမမာ ထွန်စက်များ- တွင်အသုံးပြုရန်သင့်တော်ပါသည်။
• Shell Rimula R2 Extra 20W-50 သည် ဘိုင်အိုဒီဇယ်လောင်စာအသုံးပြု သည့် ကားများတွင် ထုတ်လုပ်သူ၏ (OEM) ဆီသက်တမ်း သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Shell Rimula R4 X သည် ဗားထရိန်း၊ ပစ်စတင်ရိန်း နှင့် စလင်ဒါလိုင်းများ စသည့်အင်ဂျင်၏အဓိကနေရာများရှိ ပွန်းစားမှုကို မြင့်မားစွာ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ အင်ဂျင်ဝိုင်ထဲ ပါဝင်သည့် anti-wear ထပ်တိုးပစ္စည်းသည်သတ္တုချင်းထိစပ်သည့်ကြားထဲ၌အလွှာတစ်ခုအဖြစ်ဖြင့်
ကာကွယ်ပေးပါသည်။ soot-dispersant ထပ်တိုးပစ္စည်းသည် အင်ဂျင်တွင်းရှိ အမှုန် နှင့် အညစ်အကြေးများကို ခွဲထုတ်သယ်ဆောင်ပေးပြိး အင်ဂျင်ကို ပွန်းစားမှုမှကာကွယ်ပေးပါသည်။
Shell Synthetic Car Engine Oil
Enhance Engine Protection/ Prolong Engine Life
“Synthetic နည်းပညာသုံး ကားအင်ဂျင်ဝိုင် – သင့်ကားအင်ဂျင်၏သက်တမ်းကို ဆွဲဆန့်ပေးသောအင်ဂျင်ဝိုင်”
SHELL HELIX HIGH MILEAGE သည်သက်တမ်းရင့်အင်ဂျင်များကို အင်ဂျင်တွင်း ဂျိုး၊ ချေး(ဂျီး) ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှ အပြည့်အဝကာကွယ်ပေးပါသည်။ ထို့ပြင် အင်ဂျင်ဝိုင်တွင်ပါဝင်သော Anti-wear Agent သည် အင်ဂျင်တွင်းပွန်းစားမှုကို လျော့ချပေးပါသည်။
စွမ်းဆောင်ရည်, ဂုဏ်သတ္တိ နှင့် အကျိုးကျေးဇူးများ
• Unique Active Cleansing Technology
သည် သင့်အင်ဂျင်ကို အန္တရာယ်များ၍ စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းစေသော အနည်အနှစ် နှင့် ချေးများကို ဖယ်ရှားသန့်စင်ပေးပါသည်။
• Active clean-up
အရည်အသွေးနိမ့်သည့် ဆီ( Oil) များသုံးထားပါက၊ ၎င်းကျန်ခဲ့သည့် အညစ်အကြေးများအား ဖယ်ရှားပေးပါသည်။၂
• Anti-Wear Agent Zinc ၂၀% တိုးထားခြင်း
သက်တမ်းရင့် အင်ဂျင်များအဓိကလိုအပ်သည့် အပူချိန် နှင့် ပွန်းစားမှုကာကွယ်ခြင်းကို ဖြည့်ဆီးပေးပါသည်။၁
• ဆီသားအရည်အသွေး ကျဆင်းလာမှုအား ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း
သည် ဆီသက်တမ်း တလျောက် အင်ဂျင်အား ကာကွယ်မှုအပြည့်ပေးနိုင်ခြင်း
High Mileage အင်ဂျင် များတွင်တွေ့ရသော အင်ဂျင်ဝိုင်ခမ်းခြင်း၊ အင်ဂျင်ဝိုင်ယိုခြင်း စသည်တို့ကို လျော့ကျစေပါသည်။
နေ့စဉ် မြို့တွင်း၊ ဟိုင်းဝေး မောင်းနှင်မှုများဟာ အင်ဂျင်ဝိုင်အတွက်ခက်ခဲတဲ့အခြေနေတခု ဖြစ်ပါသည်။ SHELL HELIX HIGH MILEAGE ဟာ ဒီလိုနေ့စဉ်တောင်းဆိုမှုများနေသော ယာဉ်ကြောအခြေအနေမှာ ရှိနေတဲ့ modern ကားများ၏အင်ဂျင်သက်တမ်းကို ကြာရှည်စေပါသည်။ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်၊ ဓာတ်ငွေ့ သို့မဟုတ် အီသနော ပါသည့် လောင်စာအသုံးပြု ကားများ၌ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
သင်တို့၏ ယာဉ်များနှင့် စက်ပစ္စည်းများအတွက် မှန်ကန်သည့် Shell ထုတ်ကုန်ကို ရှာဖွေရန် http://lubematch.shell.com ရှိ Shell LubeMatch ကိုရှာဖွေလိုက်ပါ။
ဤမှာအပါသည့် သုံးစွဲမှုများအတွက် Shell ဖြန့်ချီရေးထံ အကြောင်းကြားဆက်သွယ်ပါ (သို့မဟုတ်) နည်းပညာ ဠာနကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Shell CNG/NLG Car Engine Oil
SHELL HELIX HX3 G သည် အင်ဂျင်တွင်း အနည်အနှစ်စုပုံခြင်းကို ရပ်တန့်ပေးရန် သန့်စင်မှု နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အင်ဂျင်ကို ကာကွယ်ပေးပြီး၊ အင်ဂျင်သက်တမ်းကို ကြာရှည်စေပါသည်။
ယာဉ်မောင်းသူများ ဂုဏ်ယူစွာ ရွေးချယ်သည့် Shell Helix
• အမြင့်မားဆုံးသော သန့်စင်မှု
အင်ဂျင်တွင်း အနည်အနှစ်စုပုံခြင်း၊ အညစ်အကြေးဖြစ်ခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးပြီး သန့်စင်စေသည့် နည်းပညာပါဝင်ပါသည်။
• အားကိုးနိုင်သည့် ကာကွယ်မှု
သက်တမ်းရင့် အင်ဂျင်များကို သန့်စင် ကာကွယ်ပေးပါသည်။
• ဆီသားအရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း
• မြင့်မားသည့် ဆီသားညွှန်းကိန်း (VI) သည် မောင်းနှင်ချိန်တိုင်း၌ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့် ဆီသားကို ဖြစ်စေပါသည်။
• ဓာတ်ဆီ နှင့် ဓာတ်ငွေ့ လောင်စာအသုံးပြု ကားများ၌ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ Blow-by circulation နှင့် carburettor တပ်ဆင်ထားသည့် အင်ဂျင်များအတွက်လည်း သင့်တော်ပါသည်။
ဤစာရွက်၌ မပါဝင်သည့် သုံးစွဲမှုများနှင့် အခြားထောက်ခံချက်များအတွက် Shell နည်းပညာဠာနကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Premium Multi-grade အင်ဂျင်ဝိုင် – အင်ဂျင်ကို တွင်း ဂျိုး၊ ဂျီး အညစ်အကြေး များကို ဖယ်ရှားသန့်စင်ပေး သည့်အင်ဂျင်ဝိုင်
Shell Helix HX5 သည် အင်ဂျင်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရေရှည်ကောင်းမွန်စေရန် ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးပြီး၊ အင်ဂျင်တွင်း အညစ်အကြေး နှင့် ပွန်းစားမှုများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ နေ့စဉ် အခြေအနေများစွာ၌ မောင်းနှင်နေသည့် ကားများစွာအတွက် သင့်တော်ပါသည်။
• Active Cleansing Technology
အင်ဂျင်ကိုထိခိုက် ပျက်စီးစေသည့် ဂျိုး၊ ဂျီး၊ အနည်အနှစ်များကို တားဆီးပေးပါသည်။
အရည်အသွေးနိမ့်သည့် အင်ဂျင်ဝိုင်များ အသုံးပြုထားပါက ၎င်းမှကျန်ခဲ့သည့် အညစ်အကြေး များကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးပါသည်။၂
• သာလွန်ကောင်းမွန်သည့် ပွန်းစားမှု အားကာကွယ်ပေးမှု
နေ့စဉ်ယာဉ်ကြောထဲ၌ အင်ဂျင်ပွန်းစားမှုကိုကာကွယ်၍ တိုက်စားတက်သည့် အက်စစ်များကို ဓာတ်ပြယ်စေပါသည်။၁
• ဆီ( Fuel) အမျိုးမျိုး၌ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်၊ Gas၊ ဘိုင်အိုဒီဇယ် နှင့် ဓာတ်ဆီ/အီသနောအရော စသည့် လောင်စာများအသုံးပြုသည့် အင်ဂျင်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
• Low Speed Pre-Ignition (LSPI) ကာကွယ်ခြင်း
၁. လွတ်လပ်သည့် စမ်းသပ်ခန်း၌ Sequence IVA စမ်းသပ်မှုဖြင့်အခြေခံထားပါသည်။
• Shell Helix HX5 ၏ premium multi-grade နည်းပညာသည် နေ့စဉ်မောင်းနှင်မှုအခြေအနေ များ၌ အင်ဂျင်ကိုကာကွယ်ပေးပါသည်။ Shell Helix HX5 ကို ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်၊ Gas၊ ဘိုင်အိုဒီဇယ် နှင့် ဓာတ်ဆီ/အီသနောအရော စသည့် လောင်စာများအသုံးပြုသည့် အင်ဂျင်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
• နောက်ဆုံးပေါ် တာဘိုတပ် တိုက်ရိုက်ဆီ(Fuel) ဖြန်းသည့် ဓာတ်ဆီကားများ၌ တွေ့ရသည့် ကြိုတင်ပေါက်ကွဲဖြစ်စဉ်ဟု ခေါ်သည့် (LSPI) ဖြစ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါသည်။
သင်တို့၏ ယာဉ်များနှင့် စက်ပစ္စည်းများအတွက် မှန်ကန်သည့် Shell ထုတ်ကုန်ကို ရှာဖွေရန် http://lubematch.shell.com ရှိ Shell LubeMatch ၌ရှာဖွေလိုက်ပါ။
ဤစာရွက်၌ မပါဝင်သည့် သုံးစွဲမှုများအတွက် Shell ဖြန့်ချီရေးထံ အကြောင်းကြားဆက်သွယ်ပါ (သို့မဟုတ်) နည်းပညာ ဠာနကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Shell Synthetic Technology Car Engine Oil
The best engine oil to keep engine cleans and running efficiently
Synthetic နည်းပညာသုံး အင်ဂျင်ဝိုင် – စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်ဖြင့် လည်ပတ်စေရန် အင်ဂျင်ကို သန့်စင် ကာကွယ်ပေးသည့် အင်ဂျင်ဝိုင်
ယာဉ်မောင်းသူများဂုဏ်ယူစွာ ရွေးချယ်သည့် Shell Helix
Shell Helix HX7 သည် အင်ဂျင်တွင်း အနည်အနှစ်စုပုံခြင်း၊ ဂျိူးကျခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးပြီး အင်ဂျင်အားသန့်စင်စွာဖြင့် စွမ်းရည်အပြည့်လည်ပတ်စေပါသည်။ အင်ဂျင်ပွတ်တိုက်မှုကို လျော့ချကာ ဆီ(Fuel) စားသက်သာစေပါသည်။
• Synthetic နည်းပညာ
mineral ဆီအမျိုးအစား၌ မရရှိနိုင်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးရရှိရန် synthetic နှင့် mineral ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
• Shell’s unique Active Cleansing Technology
အင်ဂျင်ကိုထိခိုက် ပျက်စီးစေသည့် ဂျိုးများ အနည်အနှစ်များကို တားဆီးပေးပါသည်။
သည် အရည်အသွေးနိမ့်သည့် အင်ဂျင်ဝိုင်များ အသုံးပြုထားပါက ၎င်းမှကျန်ခဲ့သည့် အညစ်အကြေး များကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးပါသည်။၁
နေ့စဉ်ယာဉ်ကြောထဲ၌ အင်ဂျင်ပွန်းစားမှုကိုကာကွယ်၍ အင်ဂျင်သက်တမ်းကို ရှည်ကြာစေပါသည်။၂
• သာလွန်ကောင်းမွန်သည့် ဆီသားအရည်အသွေးထိန်းသိမ်းနိုင်မှု
• ဆီသားအပါး နှင့် ပွတ်တိုက်မှုလျော့ချခြင်း
• အလွန်နိမ့်သည့် အပူချိန်၌ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း
သည် အင်ဂျင်စနှိုးသည့် အခြေအနေ၌ ဆီ်လည်ပတ်မှု မြန်ဆန်စွာဖြင့် ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။၄
• ဆီ(Oil) ပျောက်၊ ဆီစားသက်သာမှု နည်းပညာ
သည် ဆီပျောက်ခြင်း၊ ဖြည့်ဆီလိုက်ရခြင်း စသည့်တို့ကို လျော့နည်းစေပါသည်။၅
၁. ပြင်းထန်သည့် အနည်အနှစ် သန့်စင်သည့် စမ်းသက်ချက်အပေါ် အခြေခံထားပါသည်။
၂. လွတ်လပ်သည့် စမ်းသပ်ခန်း၌ Sequence IVA စမ်းသပ်မှုဖြင့်အခြေခံထားပါသည်။
၃. ACEA M111 အခြေခံ၍့ စက်ရုံမှ သတ်မှတ်ထားသည့် ဆီနှင့် နှိုင်းယှဉ်ထားပါသည်။
၄. Shell Helix mineral ဆီနှင့် နှိုင်းယှဉ်ထားပါသည်။
၄. NOACK ၏လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်နိုင်မှု စမ်းသက်ချက်နှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ လိုအပ်ချက်အပေါ် အခြေခံထားပါသည်။
• Shell Helix HX7 သည် တောင်းဆိုမှုများသည့် နေ့စဉ်ယာဉ်ကြောထဲရှိ မော်ဒန်ယာဉ်များအား ပွန်းစားမှုမှ ကာကွယ်ပေးပြီး အင်ဂျင်သက်တမ်းကို ရှည်ကြာစေပါသည်။ Shell Helix HX7 ကို ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်(Particulate Filters မပါ)၊ Gas၊ ဘိုင်အိုဒီဇယ် နှင့် ဓာတ်ဆီ/အီသနောအရော စသည့် လောင်စာများအသုံးပြုသည့် အင်ဂျင်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
• JASO SG+
• VW Standards 502.00, 505.00
Shell Helix HX7 သည် အင်ဂျင်တွင်း အနည်အနှစ်စုပုံခြင်း၊ ဂျိူးကျခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးပြီး အင်ဂျင်အားသန့်စင်စွာဖြင့် စွမ်းရည်အပြည့်လတ်ပတ်စေပါသည်။ နေ့စဉ်တောင်းဆိုမှုများသည့် ယာဉ်ကြောများထဲ မောင်းနှင်နေသည့် ခေတ်သစ်ကားများစွာအတွက် သင့်တော်ပါသည်။
အင်ဂျင်စနှိုးသည့် အခြေအနေ၌ ဆီ်လည်ပတ်မှု မြန်ဆန်စွာဖြင့် ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။၃
သည် ဆီပျောက်ခြင်း၊ ဖြည့်ဆီလိုက်ရခြင်း စသည့်တို့ကို လျော့နည်းစေပါသည်။၄
၃. Shell Helix mineral ဆီနှင့် နှိုင်းယှဉ်ထားပါသည်။
• Fiat (FCA) 9.55535-M2 ( Meets the requirements)
Synthetic နည်းပညာသုံး အင်ဂျင်ဝိုင် – အနည်အနှစ်စုပုံခြင်းမှ အင်ဂျင်ကို ရေရှည်ကာကွယ်ပေးသည့် အင်ဂျင်ဝိုင်
Shell Helix HX7 SN PLUS သည် ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင်အား သန့်စင်စွာဖြင့် စွမ်းရည်အပြည့် လည်ပတ်စေပါသည်။ အင်ဂျင်တွင်း ဂျိုး၊ ဂျီး ဖြစ်ပေါ်ခြင်း နှင့် ပွန်းစားမှုများကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါသည်။ နေ့စဉ်တောင်းဆိုမှုများသည့် ယာဉ်ကြောများထဲ မောင်းနှင်နေသည့် ခေတ်သစ်ကားများစွာအတွက် သင့်တော်ပါသည်။
• ကောင်းမွန်သည့် အင်ဂျင်တွင်း အနည်အနှစ်စုပုံခြင်းမှကာကွယ်မှု
အင်ဂျင်တွင်းဂျိုး၊ ဂျီး ဖြစ်ခြင်းကို တားဆီးကာကွယ်ပေးပါသည်။၁
အခြား မည်သည့် synthetic နှင့် mineral ဆီမှ လိုက်မမှီနိုင်သည့် အင်ဂျင်အတွင်း ပွန်းစားမှုကို ကာကွယ်မှုဖြင့် အင်ဂျင်သက်တမ်းကို ရှည်ကြာစေပါသည်။၂
• ILSAC GF-5 ဆီ(Fuel) စားသက်မှတ်ချက် ကိုက်ညီခြင်း
ဆီစားသက်သာခြင်းကြောင့်၊ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုလည်း အလားတူလျော့ကျ သွားပါသည်။၃
ဆီပျောက်ခြင်း၊ ဖြည့်ဆီလိုက်ရခြင်း စသည့်တို့ကို လျော့နည်းစေပါသည်။
၁. Sequence VG စမ်းသပ်ချက်အပေါ် အခြေခံထားပါသည်။
၂. 5W-30 ကိုအသုံးပြု၍ Sequence IVA စမ်းသပ်မှုကို အခြေခံထားပါသည်။
၃. ဆီသားအထူဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ထားပါသည်။
• နေ့စဉ် မြို့ထဲ၊ မြို့ပြင်မောင်းနှင်မှု လမ်းကြောင်းများသည် အင်ဂျင်ဝိုင်အပေါ် ပြင်းထန်သည့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖြစ်စေပါသည်။ Shell Helix HX7 SN PLUS သည် တောင်းဆိုမှုများသည့် နေ့စဉ်ယာဉ်ကြောထဲရှိ မော်ဒန်ယာဉ်များအား ကာကွယ်ပေးပါသည်။ Shell Helix HX7 ကို ဓာတ်ဆီ၊ Gas နှင့် ဓာတ်ဆီ/အီသနောအရော စသည့် လောင်စာများအသုံးပြုသည့် အင်ဂျင်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Shell Helix HX7 သည် အင်ဂျင်တွင်း အနည်အနှစ်စုပုံခြင်း၊ ဂျိူးကျခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးပြီး အင်ဂျင်အားသန့်စင်စွာ စွမ်းရည်အပြည့်ဖြင့် လည်ပတ်စေပါသည်။ နေ့စဉ်တောင်းဆိုမှုများသည့် ယာဉ်ကြောများထဲ မောင်းနှင်နေသည့် ခေတ်သစ်ကားများစွာအတွက် သင့်တော်ပါသည်။
Shell Synthetic Diesel Car Engine Oil
Shell Helix HX7 Diesel သည် အင်ဂျင်တွင်း အနည်အနှစ်စုပုံခြင်း၊ ဂျိူးကျခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးပြီး အင်ဂျင်အား သန့်စင်စွာဖြင့် စွမ်းရည်အပြည့် လည်ပတ်စေပါသည်။ နေ့စဉ်တောင်းဆိုမှုများသည့် ယာဉ်ကြောများထဲတွင် မောင်းနှင်နေသည့် မော်ဒန် Light-duty ကားများစွာအတွက် သင့်တော်ပါသည်။
• Active Clean-Up နည်းပညာ
အင်ဂျင်ဝိုင်များမှ ကျန်ခဲ့သည့် အညစ်အကြေး များကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
နေ့စဉ်ယာဉ်ကြောထဲ၌ပင် အင်ဂျင်ပွန်းစားမှုကိုကာကွယ်၍ အင်ဂျင်သက်တမ်းကို ရှည်ကြာစေပါသည်။
• ခေတ်သစ် ဆီ(Fuel) များဖြင့် အဆင်ပြေမှု
ဘိုင်အိုဒီဇယ် အင်ဂျင်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၁. NOACK ၏လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်နိုင်မှု စမ်းသက်ချက်နှင့် ထုတ်လုပ်သူများ၏ လိုအပ်ချက်အပေါ် အခြေခံထားပါသည်။
၃. လွတ်လပ်သည့် စမ်းသပ်ခန်း၌ အင်ဂျင်စမ်းသပ်ချက် Sequence IVA ဖြင့်အခြေခံထားပါသည်။
• Shell Helix HX7 Diesel သည် တောင်းဆိုမှုများသည့် နေ့စဉ်ယာဉ်ကြောထဲရှိ မော်ဒန်ယာဉ်များအား ပွန်းစားမှုမှ ကာကွယ်ပေးပြီး၊ အင်ဂျင်သက်တမ်းကို ရှည်ကြာစေပါသည်။ Shell Helix HX7 ကို အိမ်စီး ဒီဇယ်ကားများ (Particulate Filters မပါ)နှင့် ဘိုင်အိုဒီဇယ် လောင်စာများအသုံးပြုသည့် အင်ဂျင်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Shell Fully Synthetic Hybrid Car Engine Oil
Providing Enhanced Engine Protection and Fuel Economy
Fully Synthetic မော်တော်ကားအင်ဂျင်ဝိုင် – သန့်စင်မှုတို့ဖြင့်အင်ဂျင်ဝိုင်မျိုးဆက်တစ်ခု
Shell Helix Ultra SN သည် ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်များအား စက်ရုံမှထွက်လာစဉ်သကဲ့သို့ သန့်စင်ပြီး စွမ်းရည်အပြည့်ဖြင့် လည်ပတ်စေရန် Active Cleansing Technology ကိုအသုံးပြုထားပါသည်။ ၎င်းသည် အနည်အနှစ်နှင့် ပွန်းစားမှု ကာကွယ်ခြင်းကို ပြိုင်ဘက်ကင်း ထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။
• Shell’s latest Active Cleansing Technology
အင်ဂျင်အတွင်းရှိ ပစ်စတင် (Piston) များကို စက်ရုံသတ်မှတ်ချက်ထက် ၅၀% ပို၍ သန့်စင်စေပါသည်။၂
• ILSAC ၏ GF-5 ဆီ(Fuel) စားသက်သာမှု အဆင့်အတန်းပြည့်မှီခြင်း
ဆီစားသက်သာကာ၊ လေထုထဲ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုလည်း လျော့ကျစေပါသည်။
• သာလွန်ကောင်းမွန်သည့် အနည်အနှစ် ကာကွယ်နိုင်မှု
အခြားမည်သည့် အင်ဂျင်ဝိုင်မှ Shell Helix Ultra ကဲ့သို့ စက်ရုံကျကျခြင်း သန့်စင်မှုကို မနီးစပ်ပါ။၁
• သာလွန်ကောင်းမွန်သည့် ပွန်းစားခြင်း ကာကွယ်ပေးမှု
ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသည့် ရာသီဥတု နှင့် မောင်းနှင်မှုများရှိသည့်တိုင် အင်ဂျင်သက်တမ်းကို ရှည်ကြာစေပါသည်။
အရည်အသွေးနိမ့်သည့် အင်ဂျင်ဝိုင်များ အသုံးပြုထားပါက၊ ၎င်းမှကျန်ခဲ့သည့် အညစ်အကြေး များကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
• ပြင်းထန်သည့် အပူဒါဏ်ခံနိုင်မှု နည်းပညာ
ဆီပျောက်ခြင်း၊ ဖြည့်ဆီလိုက်ရခြင်း စသည့်တို့ကို ဖြေရှင်းပေးထားပါသည်။
၁. 5W 30 ကို အသုံးပြု၍ ဂျိုးကျခြင်းစမ်းသပ်ချက် Sequence VG အပေါ်အခြေခံထားပါသည်။
၂. 0W 20 ကို အသုံးပြု၍ ILSAC GF-5 သတ်မှတ်ချက်နှင့် Sequence IIIG ပစ်စတင် ဂျိုးကျခြင်း စမ်းသပ်မှုကိုအခြေခံသည့် ပျမ်းမျှရရှိမှုဖြစ်ပါသည်။
၄. 5W 30 ကို အသုံးပြု၍ ပွန်းစားမှု စမ်းသပ်ချက် Sequence IVA အပေါ် အခြေခံထားပါသည်။
၅. 5W 30 ကို အသုံးပြု၍ ပြင်းထန်သည့် အနည်အနှစ် သန့်စင်သည့် စမ်းသက်ချက်အပေါ် အခြေခံထားပါသည်။
• Shell Helix Ultra SN ၏ Fully Synthetic နည်းပညာသည် ပြင်းထန်သည့် ရာသီဥတု အခြေအနေ နှင့် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာ မောင်းနှင်ရသည့် ယာဉ်များအား အမြင့်မားဆုံး ကာကွယ်မှုပေးပါသည်။
Shell Fully Synthetic Car Engine Oil
Fully Synthetic သုံး မော်တော်ကားအင်ဂျင်ဝိုင် – မြင့်မားသည့် စွမ်းဆောင်ရည် အတွက် သင့်အင်ဂျင်ကို သန့်စင် ကာကွယ်ပေးသည့် အင်ဂျင်ဝိုင်
Shell Helix Ultra SN PLUS သည် ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်များအား စက်ရုံမှထွက်လာစဉ်သကဲ့သို့ သန့်စင်ပြီး၊ စွမ်းရည်အပြည့်ဖြင့် လည်ပတ်စေရန် Active Cleansing Technology ကိုအသုံးပြုထားပါသည်။ ၎င်းသည် သည့် အနည်အနှစ်နှင့် ပွန်းစားမှု ကာကွယ်ခြင်းကို ပြိုင်ဘက်ကင်း ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။
• Shell ၏ နောင်ဆုံးပေါ် Active Cleansing Technology နည်းပညာ
အင်ဂျင်အတွင်းရှိ ပစ်စတင် (Piston) များကို စက်ရုံသတ်မှတ်ချက်ထက် ၆၅% ပို၍ သန့်စင်စေပါသည်။
ဆီစားသက်သာ၍၊ လေထုထဲ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုကို လျော့ကျစေပါသည်။
• သာလွန်ကောင်းမွန်သည့် အနည်အနှစ် ကာကွယ်ခြင်း
Shell Helix Ultra ကဲ့သို့ အခြားမည်သည့် အင်ဂျင်ဝိုင်မှ စက်ရုံထွက်ထွက်ခြင်း သန့်စင်မှုကို မနီးစပ်ပါ။
ပြင်းထန်သည့် ရာသီဥတု နှင့် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသည့် မောင်းနှင်မှုများ ရှိသည့်တိုင် အင်ဂျင်သက်တမ်းကို ရှည်ကြာစေပါသည်။
အရည်အသွေးနိမ့်သည့် အင်ဂျင်ဝိုင်များမှ ကျန်ခဲ့သည့် အညစ်အကြေး များကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
• အလွန်နိမ့်သည့် အအေးမှတ်၌ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း
အင်ဂျင်ဝိုင် သက်တမ်းတလျှောက်လုံး အင်ဂျင်အား ကာကွယ်မှုအပြည့်ပေးပါသည်။
၂. 5W 30 ကို အသုံးပြု၍ ILSAC GF-5 သတ်မှတ်ချက်နှင့် Sequence IIIG ပစ်စတင် ဂျိုးကျခြင်း စမ်းသပ်မှုကိုအခြေခံသည့် ပျမ်းမျှရရှိမှုဖြစ်ပါသည်။
၃. ဆီသားအထူအင်ဂျင်ဝိုင်များဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ထားပါသည်။
၄. 5W 30 ကို အသုံးပြု၍ ပွန်းစားမှု စမ်းသပ်ချက် Sequence lVA အပေါ် အခြေခံထားပါသည်။
၅. ပြင်းထန်သည့် အနည်အနှစ် သန့်စင်သည့် စမ်းသက်ချက်အပေါ် အခြေခံထားပါသည်။
• Shell Helix Ultra SN PLUS ၏ Fully Synthetic နည်းပညာသည် ပြင်းထန်သည့် ရာသီဥတု အခြေအနေ နှင့် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာ မောင်းနှင်ရသည့် ယာဉ်များအား အမြင့်မားဆုံး ကာကွယ်မှုပေးပါသည်။
• Catalytic Converters နှင့် blow-by-gas စနစ်တပ်ဆင်ထားသည့် မော်ဒန် ဓာတ်ဆီကားများအတွက် သင့်တော်ပါသည်
• နောက်ဆုံးပေါ် တာဘိုတပ် တိုက်ရိုက်ဆီ(Fuel) ဖြန်းသည့် ဓာတ်ဆီကားများ၌ တွေ့ရသည့် ကြိုတင်ပေါက်ကွဲ ဖြစ်စဉ်ဟုခေါ်သည့်၊ အင်ဂျင်ကို ထိခိုက်စေသည့် (LSPI) ဖြစ်ခြင်း ကိုကာကွယ်ပေးပါသည်။
• Ford WSS-M2C946-A, M2C929-A
• General Motors GM 6094M,,4718M
• General Motors dexos1TM Gen2(D12503IK014)
• Shell ၏ Ultimate Active Cleansing Technology နည်းပညာ
• သာလွန်ကောင်းမွန်သည့် ပွန်းစားမှု နှင့် တိုက်စားမှု ကာကွယ်ပေးခြင်း
• Active-Up နည်းပညာ
• ထုတ်လုပ်သူများ၏ ထောက်ခံချက်များ
• ရှည်ကြာသည့် သက်တမ်း
• လောင်စာဆီ( Fuel) အမျိုးမျိုး၌ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
• Shell Helix Ultra ၏ Fully Synthetic နည်းပညာသည် ပြင်းထန်သည့် ရာသီဥတု အခြေအနေ နှင့် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာ မောင်းနှင်ရသည့် ယာဉ်များအား အမြင့်မားဆုံး ကာကွယ်မှုပေးပါသည်။ Shell Helix Ultra သည် ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ် ( Particulate Filter မပါသည့်ယာဉ် )၊ Gas၊ ဘိုင်အိုဒီဇယ် နှင့် ဓာတ်ဆီ/အီသနောအရော စသည့်လောင်စာသုံး ယာဉ်များစွာ တို့၌အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
• MB-Approval 229.5,226.5
• Chrysler MS 10725, 12991
• Fiat 9.55535.Z2 & Fiat 9.55535-N2 ( Meets the requirements)